Ka ilaali qiimahaaga Apple Watch ee 4 kiiska 9 hufan $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Ka ilaali qiimahaaga Apple Watch 4 leh kiis hufan oo 9 $ - BGR
Ku ilaali qiimahaaga Apple Watch 4 qiimaha hufan ee 9 $ - BGR
Haddii aad qarashgareyneyso boqolaal doolar oo cusub oo Apple Watch-ka 4, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad ka fikirto inaad ku qaadato dhowr dollar oo dheeraad ah si aad u hubiso in ay ka ilaaliso xagasha. Apple Watch 4 kiis khafiif ah oo dhoola cadeynaya shaashadda kor ku xusan ee TPU waa tayada sare ee Apple Watch ee kiiska Amazon, oo loo heli karo 40 mm et 44 mm . Noocyada Apple Watch oo ah noocyada 4. Qeyb ka mid ah laba kharash oo kaliya 9 $, iyada oo aan loo eegin xajmiga, iyo qaabka quruxda badan ee kiisku ka baxo dhabarka furan, taas oo aan faragelinin kormeerka heerka garaaca wadnaha.
Halkani waa macluumaad dheeraad ah oo ka socda bogga wax soo saarka:
[Designed for the 40mm or 44mm] Cette housse est idéale. apple watch 2018 nouvelle série 4 Apple Watch, boîtier de grande qualité en TPU de 40 mm avec protecteur dXCHARXécran intégré.
[Dajinta qaddarinta]: Kiiskan 40 mm ama 44 mm waxaa loo qaabeeyey si toos ah loogu talagalay badhamada iyo dekadaha waxtarka leh.
[Ultra Slim]: Kiiskani daawashada tufaaxa Tilmaamyada hore ee xaddiga 0,3 mm oo miisaankuna guud yahay kama badna 0,5 oz, oo aadan lumin doonin taabashada dareenka.
[Shock-proof]: Waxaa laga sameeyey TPU tayo sareeya, xoqan oo u adkaysta, kiiskani wuxuu daboolayaa dhammaan wareegyada iyo geesaha iwatch. , oo bixinta difaac guud oo loogu talagalay Apple Watch ka soo xoqid, dhibco iyo shoog
Waxaa ka mid ah: TPU oo tayo sare leh oo loogu talagalay daaweynta xNUMX mm ama 40 mm 44
Raac @BGRDeals on Twitter Raacno dalabyada ugu xiisaha badan ee aan ka helnay bogga. 19659009] Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dalabyada la kafaalo-qaaday iyo fursadaha daabacaadda ee la kafaalo qaaday, fadlan u soo dir email sponsorisé@bgr.com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan yihiin Tifaftirka iyo Xayeysiiska, BGRna waxay heli karaan komishiin ku saabsan iibsiyada laga sameeyay boosteejooyinkeena.
At 29,99 $, Echo Dot ee baabuurta marnaba jaban - BGR
Qalabka ammaanka ee Blink XT oo leh sanado 2 ayaa ka jaban Black Friday - BGR